KITRA AFRIKANINA 2018 : Niondrika teo anatrehan’ny Elgeco Plus ny Gineanina, sahala i Zimbaboe sy Cnaps
Fandresena miezinezina omaly no nandavoan’nyekipan’ny Elgeco Plus (Madagasikara) an-dry zareo Deportivo Unidad (Guiné Equatorial) tetsy Mahamasina, omaly. 15 décembre 2018
Nisaraka ady sahala iray noho iray kosa Cnaps Sport sy ny ekipa zimbaboena Platinium izay nihaona teny amn’ny kianjan’ny Cnaps Sport eny Vontovorona. Lavon’ny ekipan’ny Elgeco plus tamin’ny isa mavesatra telo noho iray ry zareo Gineana. Teo amin’ny minitra fahafito, fizaràm-potona voalohany anefa dia ry zareo ekipa vahiny no nisantatra ny fampidirana ny baolina tany anaty harato noho ny fahadisoana nataon’ny ekipan’ny Elgeco plus tao anaty faritra tsy azo ivalozana.
Ny laharana faha-7 avy amin’ny ekipan’ny Deportivo Unidad no nitsara ity « penalty » ka nitarihan’ireto farany ny isa iray noho ny aotra. Minitra telo taorian’io, izany hoe teo amin’ny minitra faha-10 dia nanao valim-panafihana ny ekipan’ny Elgeco plus tamin’ny alalan’i Neste laharana faha-9 sady lohalaharan’ny ekipa Malagasy. Tsy nampoizin-dry zareo Gineana ity fanafihana tampotampoka ity ka dia ady sahala ny baolina teo amin’io minitra fahafolo io. Nitohy hatrany ny lalao ary nisesisesy sy nifamaly ny fanafihana teo amin’ny ekipa roa tonta saingy samy tsy nisy nahita mangirana. Nijanona ho iray sy iray araka izany ny isa nisarahana teo amin’ny fizaràm-potoana voalohany na dia nisy iray tokony ho tafiditry ny lohalaharan’ny Elgeco plusy ihany aza teo amin’ny minitra faha-40.
Teo amin’ny minitra faha-5 tamin’ny fizaràm-potoana faharoa indray isika Malagasy vao nahita isa iray ka nahatonga ny baolina ho roa ho an’ny ekipan’ny Elgeco plus ary nijanona ho iray kosa ho an’ny ekipa gineanina. Fahadisoana nataon-dry zareo Gineanina no notsarain’ny ekipan’ny Elgeco plus teto saingy tsy maty avy hatrany fa votsotra teny an-tanan’ny mpiandry tsatokazo ary io no nohararaotin’ny ekipa Malagasy nampidirina sy nahatonga ny lalao ho roa noho iray. Ny tolotra tsara petraka nomen’ny laharana faha-11, voarain’i Bila avy any amin’ny ilany havanan’ny kianja tanin-dry zareo Gineanina no nampiakatra ny isa azon’ny Elgeco plus ho telo.
Nanomboka teo dia nanidy trano ny ekipan’ny Elgeco plus ka nijanona tamin’io isa mavesatra telo noho iray ny lalao. Taorian’ity lalao ity moa dia nisaotra ny mpanotrona rehetra ny filohan’ny Elgeco plus Andriamadisoa Alfred ary niantso irao malala-tanana rehetra hanohana hatrany ity ekipa ity noho izao fandresena miezinezina azony izao.
Somary mafimafy araka izany ny miand ry an-dry zareo ekipan’ny Cnaps Sport amin’ny lalao miverina hatao any Zimbaboe. Raha mahavita miaro ny tombon’isa goavana azony kosa ny Elgeco Plus dia afaka hiatrika ny dingana manaraka.